10 Open Source Makambani Ari Kutungamira Iyo Indasitiri Linux Vakapindwa muropa
Yakave nguva yakareba kubvira iyo open source software Iyo yakamira kuve chimwe chinhu chinoshamisira, chimwe chinhu chinongodzoserwa kune vabiridzi vakagadzira yavo yega zvirongwa uye vakaigovana nevamwe pane iyo network. Mamwe makambani akaverengerwa mukati meawa, mamwe akapera kutsakatika kana kupinzwa nevamwe. Vamwe vakaenderera uye vakave zvikara chaizvo izvo zvinowana mari zhinji nemari bhizinesi iri iro vazhinji vasina kuona chero rudzi rwemabhenefiti makore apfuura.
Linus B Torvalds Akatotaura kanoverengeka kuti zvakanaka sei kuti kune makambani mazhinji uye mazhinji ari kushanda neakavhurika sosi, uye akavatambira. Iyo Linux Foundation iri kuona yakawanda uye inowedzera kufarira uye nhengo zhinji dzichijoinha. Iyo rondedzero iri kukura, kubva kune madiki matangi ane mazano akanaka kwazvo, kune makuru, ane simba kwazvo makambani. Kunyangwe isu tisingafanire kukanganwa simba uye mupiro wenzvimbo, chinova chinhu chakakosha mune izvi ...
Kana iwe uchida kuziva kuti aya makambani ndeapi, iwo runyorwa neiyo Vatungamiriri gumi ve open source zvingave sezvizvi:
Red Hat: hofori ine ngowani tsvuku ingangodaro iri imwe yemakambani ane simba mune ino chikamu. Parizvino yakatengwa neBMM sekuziva kwako, saka chichava vaviri vanonakidza kuve vakasimba mumasevhisi emakore.
Canonical: ndeimwe yemakambani ave nesimba rakakura uye nekuvapo kwakawanda munyika yeakavhurika sosi tekinoroji. Nemapurojekiti akasimba egore nemakambani, kuwedzera kune iro rakakurumbira Ubuntu distro, zvinova zvinozivikanwa nevazhinji ...
Google: hofori yekutsvaga yakashoropodzwa kune zvimwe zviito, uye kurumbidzwa kune vamwe vazhinji. Asi isu hatifanire kukanganwa kuti ndeimwe yemakuru inopa zvakanyanya kuvhura sosi.
IBM: Kunze kwekutora Red Hat, IBM ine nhoroondo refu yekupa yakavhurika sosi mapurojekiti uye inopa kodhi. Izvo hazvifanirwe kukanganikwa kuti anga achinyanyobatanidzwa mukusimudzirwa kweLinux kernel, kuwedzera kune mamwe akawanda akavhurwa mapurojekiti.
pangataura: Kunyangwe hazvo vainewo mabasa epfuma, hatifanirwe kukanganwa kuti vakambotenga imwe yemakuru eakavhurika sosi, seSun Microsystems. Kunyangwe ivo vakarasikirwa kana kudzima kubva kune mamwe mapurojekiti eSuva, ivo vanoramba vaine vamwe vazhinji.
Adobe: Zvinogona kuita sedzisinganzwisisike, asi kunyangwe ichizivikanwa nemapurojekiti ayo epamutemo akadai sePhotohop, Premier, Acrobat Reader, nezvimwewo, chokwadi ndechekuti vane hombe yakavhurwa sosi repamhepo paGitHub.
Microsoft: hongu, imwe inogona kutsvedza, asi nguva pfupi yadarika ivo vabatana neyakavhurika-sosi. Ose ari maviri anopa kodhi, achiburitsa mamwe emapurogiramu avo, uye zvakare neazvino GitHub kutenga.
mongoDB: imwe yemapurojekiti akanyanya kukosha eimwe dhatabhesi kune mamwe madhatabhesi akavharwa.
Docker: Zviripachena kuti chirongwa ichi chave chakakosha zvakanyanya nekuda kwekusiyana-siyana uye mashandisirwo ari kugadzirwa mumidziyo, kunyanya kumapurojekiti egore.
CHEF: isingazivikanwe zvakanyanya, asi yakakosha yakavhurwa sosi chikuva chekushandura uye kutsanangura mafambisirwo pane chero chiyero.
Uye kana tikatarisa pakati penhengo dzeLinux Foundation, kana iyo RISC-V Foundation, nezvimwewo, zvirokwazvo mazita ari pane aya anogona kuramba achiwedzerwa. Asi aya ndiwo gumi anonyanya kufadza andakawana ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » 10 yakavhurika sosi makambani anotungamira chikamu
Kwanga kusiri iko kufamba kuri nyore kutora kutonga kweJava, kunoshandiswa zvakanyanya muzvigadzirwa zvako, uye mahara software inoyamwa Babamunini Ellison?
Nzira dzakasiyana siyana dzekushandisa Windows vhidhiyo mitambo paGNU / Linux